निक्षेपको ब्याजदर महँगीभन्दा तल झर्दै
२०७७ असार ४ बिहीबार ०६:२७:००
बैंकहरूको निक्षेपमा ब्याजदर घट्दै गर्दा सहकारीतर्फ पुँजी पलायन हुने सम्भावना
कर्जा विस्तार रोकिएसँगै वाणिज्य बैंकहरूले पुँजी लागत कम गर्न निक्षेपको ब्याजदर घटाउने तयारी गरेका छन् ।
चैत मसान्तको तुलनामा बैंकहरूको कर्जा २१ अर्बले घटेको छ । यता, निक्षेप भने ५७ अर्बले बढेको छ । चैत मसान्तमा बैंकहरूको निक्षेप ३१ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा बढेर ३२ अर्ब ४६ अर्ब पुगेको हो । कर्जा भने २८ खर्ब ४५ अर्बबाट घटेर २८ खर्ब २४ अर्बमा सीमित भएको छ ।
‘कतिपयले सबैखाले निक्षेपमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाउने भनिरहेका छन् भने कतिपयले निश्चित निक्षेप योजनामा मात्रै घटाउने तयारी गरेका छन्,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका कार्यकारी निर्देशक भुवन दाहालले भने ।
यसो भए औसत ब्याजदर ६ दशमलव २७ प्रतिशत हुन सक्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चैत अन्त्यमा बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर औसतमा ६ दशमलव ७० प्रतिशत थियो । चैतमा मूल्यवृद्धि ६ दशमलव ७४ प्रतिशत छ । निक्षेपकर्ताले मूल्यवृद्धिको तुलनामा लाभ पाएका देखिँदैनन् । थप ब्याजदरमा हुने कटौतीले मूल्यवृद्धिको तुलनामा ब्याजदर ऋणात्मक हुने अवस्था छ ।
कर्जा लगानीमा आएको सुस्ती र निक्षेपमा भइरहेको वृद्धिले बैंकहरू ब्याजदर घटाउनैपर्ने दबाबमा छन् । कर्जा लगानी विस्तारमा समस्या देखिएकै कारण बैंकहरूमा तरलता अधिक हुन थालेको छ ।
२८ जेठमा मात्रै राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो बैंकहरूबाट ७ दिनका लागि २० अर्ब खिचेको छ । ५ महिनापछि राष्ट्र बैंकले यसरी बैंकहरूबाट रिभर्स रिपो जारी गरेर रकम खिचेको हो । १५ वटा बैंकहरूले औसत १.२७ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ३३ अर्ब रुपैयाँ राख्न खोजेका थिए । २० अर्ब खिचे पनि बैंकहरूसँग हाल ६५ अर्ब अधिक तरलता बाँकी छ ।
ब्याज घट्दा सहकारीमा पुँजी जाने सम्भावना
बैंकहरूमा महँगीदरभन्दा कम ब्याज भएमा सहकारीतर्फ पुँजी जाने सम्भावना बढ्ने देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति यसअघि पनि नदेखिएको होइन । ०७२ देखि ०७३ असारसम्ममा सहकारीमा राखिएको निक्षेप रकममा ९३ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको थियो ।
०७२ असारमा सहकारीमा २ खर्ब २ अर्ब निक्षेप रहेकोमा ०७३ असारमा २ खर्ब ९५ अर्ब निक्षेप पुगेको थियो । त्यतिखेर बैंकहरूको ब्याजदर महँगीदरभन्दा निकै कम (ऋणात्मक अवस्था) थियो । बैंकहरूले औसतमा ३ दशमलव ९४ प्रतिशत ब्याज दिँदा महँगीदर ७ दशमलव २ थियो ।
‘महँगीको तुलनामा औसत ब्याजदर घट्दा बैंकहरूबाट पुँजी बाहिरिएको देखिँदै आएको छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘तर, पछि ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप बढ्न गाह्रो भएर कर्जायोग्य पुँजी अभावको समस्या देखा परेको थियो ।’ बन्दाबन्दीको अवधिपछि कर्जाको मागमा सुधार आउन सक्ने सम्भावना पनि रहेकाले अहिले नै बैंकहरूले ब्याजदर कटौतीमा लाग्नु नहुने भट्ट बताउँछन् ।
#निक्षेप # ब्याजदर # प्रिन्टसंस्करण
नबिल बैंकको नयाँ ब्याजदर
वाणिज्य बैंक छाडेर बढ्यो नेप्से : बैंकमा कर्जा र निक्षेप दुवैको ब्याजदर सस्तो हुँदा बजारलाई लाभ
घर-गाडी कर्जामा ब्याजदर स्थिर
सिभिल बैंकले बचतमा ६ र मुद्दतीमा ८.७५ प्रतिशत ब्याज दिने
मुक्तिनाथ विकास बैंकले हायर पर्चेज कर्जाको ब्याजदर घटायो
६ महिनापछि आजबाट आन्तरिक उडान सुरु(फोटोफिचर)
कृषकको चिन्ता कसले गर्ने ?
निरन्तरको निषेधमा सडकपेटीका श्रमजीवी
प्रधानमन्त्रीले उठाएका प्रश्न